Blogspot with PHP ? - MYSTERY ZILLION
Blogspot with PHP ?
December 2009 edited April 2011 in Blogspot
can i make blogspot with php and without using template..can i use it??? how can???give me some idea for me please
i guess, no way bro.
blogspot မှာတော့ PHP နဲ့ ရေးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။<br>တခြား ဟို့စတင်းရော ဒိုမိန်းပါ သုံးခွင့်ရတဲ့ ဆားဗစ်တစ်ခုခုသုံးပါ။<br>ဥပမာ www.000webhost.com<br>
ကျွန်တော်လောလောဆည်သုံးနေတာကတော့ http://www.freehostingcloud.com >> FHC ပေါ့။ Blog ရေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Wordpress ကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်။ Blogspot က Widget တွေကို 1click installation နဲ့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကို Install လုပ်နိုင်ပေမယ့် Wordpress မှာလဲ ဘယ်ဟာက ဘယ်ပုံဆိုတာတော့ မပြထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သုံးကြည့်ပါ။ Blogspot ထက်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ <br>